प्रचण्डले ‘बादललाई सम्झिँदा पनि मलाई एलर्जी हुन्छ’ भनेपछि प्रचण्डको गृहजिल्ला नै पुगेर बादलले गरिदिए यस्तो घोषणा, माओवादीभित्र खैलाबैला !
शुक्रबार, अशोज ८, २०७८ ६:५९
नेपाल अनलाइन पत्रिका – काठमाडौं। प्रचण्डले ‘बादललाई सम्झिँदा पनि मलाई एलर्जी हुन्छ’ भनेपछि प्रचण्डको गृहजिल्ला नै पुगेर बादलले गरिदिए यस्तो घोषणा, माओवादीभित्र खैलाबैला ! ***यो समाचारको भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नु ***
नेकपा एमालेका नेता रामबहादुर थापा (बादल) ले आगामी निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग लड्न तयार रहेको घोषणा गरेका छन् । चितवनको भरतपुर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै बादलले भने, ‘यो विषयमा पार्टीले निर्णय गरेको छैन । आगामी दिनमा पार्टीले निर्णय गरेमा प्रचण्ड भर्सेस बादल हुन पनि सक्छ ।’
यता हिजोमात्रै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीबाट अलग्गिएका रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझीहरुलाई सम्झिँदा पनि आफूलाई एलर्जी हुने गरेको टिप्पणी गरेका थिए ।
काभ्रेमा बिहीबार आयोजित योङ कम्युनिस्ट लिग ९वाईसीएल० नेपालको पाँचखाल नगर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै दाहाले एमालेमा लागेका नेताहरुप्रति उक्त टिप्पणी गरेका हुन् ।
दाहालले भने, ‘त्यो टोपबहादुर भन्नेलाई मैले कतिचोटी मन्त्री बनाएँ । अहिले कहाँ हेर्नुस् त‘ त्यो बादल हिजोको साथी । अहिले त सम्झिँदा पनि तैट १ एलर्जी हुन्छ १ तानेर ल्याएर गृहमन्त्री, सरकारको नेतृत्व तपाईंले गर्नुस् भनेर बनाएको त माओवादीले, मैले हो नि १ हेर्नुस् । जो जति माथि आएको छ । त्यो त्यति बिग्रिएको छ । बुझ्नु होला ।’ तत्कालीन नेकपा पुरानै अवस्थामा फर्किएपछि थापा समूह एमालेमा लागेका थिए ।
नेताहरुको प्रवृत्ति नबदल्ने हो भने पार्टी विघटन गर्नुपर्छ भन्ने धारणा पछिल्लो समय दाहालले राख्दै आएका छन् । उनले आफू पनि बिग्रिएकोले सच्चिन तयार रहेको बताए । ‘म अरुलाई धेरै भन्दिनँ । बिग्रिएको मै हुँ । अब म सच्चिन्छु । अरु को(को सच्चिने, नसच्चिने तपाईंहरु सोच्नुस्,’ उनले थपे, ‘हिजो जनयुद्धमा हामफालेँ ।
अर्कोपटक शान्ति प्रक्रियामा हामफालेँ । कहिले संविधान बनाउनमा हामफालेँ । पार्टी एकतामा हामफालियो । फेरि समाजवादी क्रान्तिका लागि म चाहिँ हामफालेँ फालेँ । तपाईंरहामी सबैले यो फटाहाले बिगार्‍यो भन्नुभन्दा, मैले के बिगारेँ भन्ने सोच्न थालियो भने त्यहींबाट रुपान्तरण सुरु हुन्छ ।’
दाहालले बाँकी जीवन समाजवादी क्रान्तिका लागि लड्ने भनाइ पुनः दोहोर्‍याए । ‘अब कति वर्ष बाँचिन्छ । ज्यान छोडेर समाजवादी क्रान्तिको निम्ति युवाहरुको नेतृत्व गर्छु म । तपाईं युवाहरुले मलाई साथ दिनपर्‍यो पहिलेजस्तै । मचाहिँ हामफालेँ फालेँ ।’